Hydraulic Screen Changer System - China Hydraulic Screen Changer System Inotengesa, Fekitori -Jwell
Double-pani hydraulic isiri-yekumira screen chinja akateedzana:
● Inotora tekinoroji yepamusoro yekumanikidza tekinoroji, kuburikidza nekumanikidza kwema polymers kutyaira zvikamu zvechisimbiso, kuti uwane iyo yakanakisa yekuisa chisimbiso mhedzisiro uye nekuchinja skrini nekukurumidza.
● Uchishandisa simbi yepamusoro yegiredhi, mushure mekuita nitriding maitiro ekuwedzera hupenyu hwechigadzirwa.
● Inoshandura modhi yebasa, inogona kuvimbisa kuyerera kwezvinhu zvinoenderera, kugadzikana uye neyakagadziriswa parameter yekudzokorora, kana uchinja iyo skrini.
● Mushure mekugadziriswa kwe rheological kuburikidza neplate yeseru, kudzikisa iyo extrusion maitiro emvura shear.
● Kushandisa mudziyo wemudziyo wemukati, kuitira njodzi uye kuchengetedza magetsi. Tambo dzakakomberedzwa zvizere, nekuda kwechimiro chinoratidzika.
● Modular musanganiswa mapatani, akakodzera akasiyana akajairwa extrusion muchina, uye zviri nyore kuchenesa.
Hollow Cross Chikamu Plate Die Series
Yakakura Dhayamita HDPE Mvura Inopa uye Gasi Kupa Pipe Extrusion Line
Jwell JWP PP firimu Matatu Mashini Kubatanidza Pelletizing Machine